Web Data Scraper - Bilaogy manam-pahalalana
Mientanentana tsikelikely ny fahazoana midadasika matetika tahirin-kevitra. Mampalahelo fa ny fandikana ny angon-drakitra dia tsy vitan'ny hoe mahatsiravina fotsiny, fa mandany fotoana ihany koa. Izany no mahatonga ireo fitaovana maimaim-poana maimaim-poana ao amin'ny tranonkala, fa ny kalitaon'ny vokatra aterany dia miovaova be. Ankoatra izany, samy manana ny heviny sy ny fiheverany avokoa izy ireo. Noho izany, tokony hitandrina ianao amin'ny safidin'ny fitaovana maimaim-poana ao amin'ny tranonkalanao.
Web Data Scraper 4.1.2.29 dia fitaovana mahomby mahomby ahafahana manala ny angona avy amin'ny tranokala maro toy ny Flipkart, Alibaba, OLX, Quikr, Craigslist, Ebay ary Amazon, mba hitenenana vitsivitsy. Ity fitaovana ity dia manana fahafahana hametaka sy manondrana ny angon-drakitra ao anaty tahadika. Azony atao koa ny manakona ny angona avy amin'ny pejy rehetra amin'ny tranonkala.
Amin'ny ankapobeny, dia fitaovana iray izay mamerina haingana be ny angon-drakitra avy amin'ny pejy maro miaraka amin'ny haingam-pandeha mahatalanjona sy ny fahamendrehana goavana. Ny tena manan-danja indrindra, dia azo atao izy io mba handrindra azy manokana.
Ny fitaovana dia mamaha ny olan'ny tsy fahafahana mametraka ny angon-kaonty ilaina ho an'ny fanadihadiana sy ny fampitahana. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, afaka mamoaka ny angona avy amin'ny ecommerce sy tranokala voamarina izay manana pejy an-jatony. Azony atao koa ny manakona mora foana ny angona avy amin'ny pejy fotsy sy mavo toy ny Yelp.com..
Afaka mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkalan'ny tranonkala toy ny Zillow sy Homefinder. Ilaina ihany koa ny fampidirana fampidirana toy ny Expedia, Tripadvisor, Booking, ary maro hafa. Manao asa mahomby ho an'ny vavahadim-pitaovana koa izy.
Mety ho vitany tanteraka ny mandeha irery amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra tsy misy dikany na tsy misy dikany amin'ny famonjeny fotoana marobe. Azonao atao ihany koa ny mametaka sary miaraka amin'ny lahatsoratra sy singa hafa ao amin'io tranokala io ihany ao anaty iray. Izany no antony maha-fitaovana tena tsara ho an'ny karazam-barotra rehetra.
Ity fitaovana ity dia natao hanesorana ny data avy amin'ny Google Maps. Afaka mamafa ny angon-drakany an'arivony izy ao anatin'ny fotoana fohy. Ity fampiharana mora ampiasaina ity dia afaka manampy anao hametaka votoaty tsy voafetra amin'ny tranokala.
Ity fampiharana ity dia mamafa mora sy mahomby ny asa LinkedIn. Azonao ampiasaina izany mba hanakanana ireo asa avy amin'ny LinkedIn. Koa satria asaina mivezivezy eo amin'ny vohikala vaovao ireo asa vaovao, dia hohavaozina ny angona tahirin-kevitrao.
Mpandrindra ny tranokala:
Ity dia fitaovana iray hafa mandeha samirery. Izany dia manokana amin'ny fanangonana fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny orinasa. Azonao atao ny mandamina azy io mba hikaroka sy hanaparitaka vaovao momba ny asa sasany. Izany dia fitaovana tsara amin'ny fananganana lisitra mailaka mailaka.
Azonao ampiasaina ity fitaovana ity mba hanangonana rohy valiny sy URL avy amin'ny Google. Ity fitaovana ity dia tena tolo-kevitra ho an'ny PPV sy fitaovana hafa sy fampiroboroboana an-tserasera.
Xpath Scraper fototra:
Ity fitaovana ity dia sady manao fikarohana momba ny fitrandrahana Xpath. Tena mahasoa ho an'ireo mpanome tolotra SEO. Hanamora ny asany izany.
Ho famintinana, ankoatra ireo fitaovana vitsivitsy fampiasana sarisary aseho etsy ambony, dia misy fitaovana maro hafa efa hita ao amin'ny tranonkala, ary maro kokoa no hivoatra satria mitombo be ny fangatahana angon-drakitra Source .